Maraykanka, 10 September 2019
CIA-da ayaa lahayd xog-ogaal awood u leh inuu wax badan ka ogaado aqalka Kremlin-ka Ruushka, kaasi oo kaalin weyn ka cayaaray qiimeyntii lagu sameeyey in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu amray faro-gelinta doorashadii Mareykanka ee 2016, waxaa sidaas weriyey CNN iyo New York Times.
Trump oo Baajiyey Kulan Taliban Lagula Qaadan lahaa Maraykanka Gudihiisa
Trump ayaa sababta ku sheegay markii ay soo baxday in Taalibaanku ay sheegteen mas’uuliyadda qarax toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Kabul oo dadka ku dhintay uu ka mid ahaa askari u dhashay Maraykanka
Duufaanta Dorian ayaa u muuqata mid gaabis ku socota ilaa iyo hadda, xilli ay ku wajahantay xeebaha gobolka Florida.
Mareykanka iyo Taliban oo qarka u saaran heshiis
Ergeyga Mareykanka ee hoggaaminaya dadaallada heshiiska lagula galayo Taliban ayaa magaalada Kabul kula kulmay madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani, xilli heshiis taariikhi ah oo lala galayo kooxda muqaawamada uu aad u dhow yahay.
Duufaanta Dorian oo kusoo dhawaatay Bahamas
Duufaanta loogu magac daray Dorian ayaa la filayaa in ay caawa ku dhufato qeybo kamida jasiiradaha Abaco iyo Bahamas.
400 sano guuradii billowga adoonsiga African-ka Mareykanka
Dhamaadkii Bishii August ee sanadkii 1619-kii, muddo haatan laga joogo 400 oo sanadood ayay aheyd markii ugu horreysay oo dalka Mareykanka la keenay dadka African-ka ah ee la adoonsan jiray.
Trump oo ka baaqday Denmark, Greenland darteed
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ka baaqday safar qorsheysnaa inuu ku tago dalka Denmark, halkaasi oo kulan kula yaalan lahaa Ra’iisal Wasaaraha dalka Denmark Mette Frederiksen.
Wasaaradda arrimaha gudaha Israel, ayaa sheegtay inay Rashida Tlaib oo ka tirsan Aqalka Wakiilada Mareykanka, u ogolaatay inay booqato qoyskeeda degan Daanta Galbeed ee la haysto.
Inta la xaqiijiyey 6 ka mid ah ciidamada booliiska ayaa la dhaawacay, waxaana dableydan ay weerarkan wadeen muddo saacado ah